ရှမ်းပြည်အစိုးရ၏ ဒု-နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ခုန်လု(ဝါ)လွယ် ခုန်ခကွယ်လွန် | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	ရှမ်းပြည်အစိုးရ၏ ဒု-နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ခုန်လု(ဝါ)လွယ် ခုန်ခကွယ်လွန်	January 14, 2009
တိုင်းရင်းသားအသံရှမ်းပြည်အစိုးရ၏ ဒု-နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ခုန်လု(ဝါ)လွယ် ခုန်ခကွယ်လွန်
မနက်ဖန်မှာ ဂျန်နဝါရီလ (၁၅)ရက်နေ.ကျရင်မီးသင်္ဂြိုဟ်မည်ဖြစ်ပါသည်၊သူဟာ (၁၂)နေ.တုန်းကအသည်ကးင်ဆာရောဂါနဲ. ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်၊ခုန်လုကွယ်လွန်သည့်အပေါ်တိုင်းရင်းသားအသံမှကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်များနဲ့ထပ်တူထပ်မျှကြေးကွဲ ဝမ်းနည်းပါကြောင်းနှင့်ရှမ်းလူမျိုးအတွက်သာမကတိုင်းရင်းသားအားလုံးအတွက်ပါဆုံးရှံးမှုတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါ သည်။
ဆက်သွယ်လိုသူများအတွက်For more information, please contact Suwan Soikhamseng Tel: 085-6665982 or Sai Noi, Tel: 084-1705487
by admin — last modified 2009-01-14 05:09
Funeral for Khun Lu aka Lionel Khunka, “Deputy Foreign Minister” for the “Shan Government,” who passed away in Chiangmai on Monday, 12 January, will be held on Thursday, 15 January, according to its “information minister” Suwan Soikhamseng. Sao Hso Hkan Hpa
His remains would be moved from the Wat Papao Shan temple at 13:00 tomorrow to the nearby Paphaeng temple to be cremated.Born on 11 May 1938, Khun Lu joined the movement led by Sao Hso Hkan Hpa aka Tiger Yawnghwe, after it was formed on the Chiangrai border on 25 March 2005. His father Khun Ka served asaminister at the Hsenwi palace during Prince Sao Hom Hpa’s reign, when the Federated Shan States as the Shan State was then known, was stillaseparate entity from Burma. Known asabrilliant student at the Rangoon University, he had worked at the Thai embassy in Rangoon before coming to Thailand.
His funeral is expected to be attended by most of the “cabinet” members residing in Thailand.
The formation of the “Shan Government” and its declaration of independence on 17 April 2005 remainacontroversial topic both inside and outside the Shan community to this day.
For more information, please contact Suwan Soikhamseng Tel: 085-6665982 or Sai Noi, Tel: 084-1705487
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲသည် နိုင်ငံရေး ပြဿနာ ပိုကြီးထွားလာနိုင်ဟု RCSS ပြော
ဖို.ဝိန်းမြို.၊ IVY TECH COMMUNITY COLLEGE မှာပြုလုပ်မည့်တိုင်းရင်းသားပွဲတော်တဲ့၊တိုင်းရင်းသားအစစ်အမှန်၏ပွဲ တော်ဖြစ်ပါစေလို.တိုင်းရင်းသားအသံမှဆုတောင်း